10 यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ थिम पार्क | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ थिम पार्क
पढ्ने समय: 8 मिनेट(Last Updated On: 08/01/2021)
एक सबैभन्दा रोमाञ्चक पारिवारिक बिदा एक रोमांचक यात्रा मा जाँदैछ यूरोप मा एक उत्तम थिम पार्क को एक. फ्रान्समा मात्र, तपाईं छौँ3आश्चर्यजनक थिम पार्क, र हामीले यो हातले उठाएका छौं 10 तपाईंको अर्को परिवार यात्रा को लागी यूरोपमा उत्तम थिम पार्क. विश्वको सर्वश्रेष्ठ रोलरकोस्टर सवारी, मंत्रमुग्ध वन, जादुई जमिन, परियों, र समय यात्रा आकर्षणहरू, तिम्रो लागि प्रतीक्षा गर्दै, फ्रान्स देखि अस्ट्रिया र बेलायत.
1. रस्ट जर्मनीमा यूरोपा पार्क
जर्मनीमा सबैभन्दा ठूलो थिम पार्क, यूरोपा थिम पार्क भन्दा बढी छ 100 आकर्षण. यूरोपा पार्क यूरोप मा दोस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय थीम पार्क हो, पेरिस मा डिज्नेल्याण्ड पछि. यदि तपाइँका बच्चाहरू रोलरकोस्टरहरू मन पराउँछन्, त्यसोभए तिनीहरूमा विस्फोट हुनेछ 13 पार्कमा रोलरकोस्टरहरू.
यदि तपाईं स्ट्रासबर्गमा यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भए तपाईले कम्तिमा योजना गर्नु पर्छ2युरोपा पार्कको लागि दिनहरू. This is due to the number of exciting attractions already mentioned, र थप शानदार कार्यक्रमहरू. The youngest will enjoy an enchanting elf ride, र आकांक्षी दौड ड्राइभरहरूको लागि बिग-बबी-कार सर्किट, जबकि ठूला बच्चाहरू र अविभावकहरू ब्लू फायर मेगा कोस्टरमा आइसल्याण्डिक परिदृश्यमा उडाइनेछ.
यसबाहेक, यदि तपाईं वास्तवमै लामो यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं एक-मा होटेलमा बस्न सक्नुहुन्छ. यस तरिकाले तपाईले युरोप-पार्कको धेरैजसो भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ, र सबै थीम्ड क्षेत्रहरूको अनुभव गर्नुहोस्: अफ्रीकामा एडभेन्चरल्याण्डबाट ग्रिमको जादू गरिएको वन.
कसरी युरोपा पार्कमा पुग्ने?
यूरोपा पार्क को बारे मा छ3फ्रैंकफर्ट बाट घण्टा, र तपाईं यसलाई पुग्न सक्नुहुनेछ रेल यात्रा जर्मनीभरि रि Rसिम. त्यसपछि, तपाईं कार वा बस स्थानान्तरण भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ.
कोलोन एक ट्रेन संग फ्रैंकफर्ट गर्न
म्यूनिख फ्रान्कफर्ट एक ट्रेन संग
ह्यानोभर फ्र्यान्कफर्ट एक ट्रेन संग
ह्याम्बर्ग एक ट्रेन संग फ्रैंकफर्ट गर्न
2. डिस्नेल्याण्ड पेरिस फ्रान्स
यो सायद हाम्रो सबैभन्दा प्रख्यात थिम पार्क हो 10 युरोपको सूचीमा सर्वश्रेष्ठ थिम पार्कहरू, पेरिस डिज्नील्याण्ड सबै उमेरका आगन्तुकहरूका बीच मनपर्दो हो. हाम्रो सबै-समय मनपर्ने डिज्नी कथाहरूबाट आकर्षक वर्णहरू, प्रत्येक वर्ष लाखौं आगन्तुकहरु लाई आकर्षित गर्नुहोस्.
डिज्नेल्याण्ड चेस शहर मा छ, फ्रान्समा. यो वाल्ट डिस्ने स्टुडियो र आकर्षण पार्क को घर छ, जहाँ तपाईं एक कहानीमा जान सक्नुहुन्छ, र तपाईको सबै बाल्यकाल सपनाहरु साकार हुन्छन्. वाल्ट डिस्नेको विश्व जीवनमा आउँदछ, आश्चर्यजनक आकर्षणहरूमा, र एलिसको भूलभुलैया र मिकीको 4D शो जस्ता शो.
तपाईं यो जादूलाई सम्पूर्ण सप्ताहन्तमा विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ, र डिज्नी होटेलमा बस्नुहोस्, वा पार्टनर होटेलहरू जुन डिज्नील्यान्डबाट केवल एक निःशुल्क शटल मात्र हो.
कसरी डिस्नेल्याण्ड पुग्ने?
डिस्नेल्याण्ड मात्र छ 20 पेरिसबाट मिनेट टाढा. तपाईं पेरिस एयरपोर्टबाट यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ, वा मार्ने-ला-वल्ली / चेसी रेलवे स्टेशन.
3. अस्ट्रियामा भियनेस प्राइटर थिम पार्क
प्राटर वियन अष्ट्रियामा सर्वश्रेष्ठ थिम पार्क हो, र एउटा 10 यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ थिम पार्क. तपाईंको परिवारसँग धेरै जंगली रोलरकोस्टरहरूमा अद्भुत समय हुनेछ, र भर्चुअल वास्तविकता आकर्षणहरू, जस्तै डा. आर्किबाल्ड.
साथै, त्यहाँ गो-कार्ट छन्, प्रेतवाधित महलहरू, र सबै माथि बन्द गर्न, अस्ट्रियामा विशाल फेरिस व्हील. यो भव्य फेरीस व्हील वर्षभर खुल्ला छ र एउटा हो भियनाका शीर्ष स्थलहरू.
कसरी भियनाको प्राइटर थिम पार्कमा पुग्ने?
द प्रिटर मनोरञ्जन पार्क भियनाको दोस्रो जिल्लामा अवस्थित छ, र तपाईं यसलाई ट्याक्सी वा सबवेमार्फत पुग्न सक्नुहुनेछ शहरको केन्द्रबाट.
4. Gardaland इटाली
जस्तो कि तपाईंले अनुमान लगाउनुभएको हुन सक्छ, गार्डाल्यान्ड इटालीको गार्डा ताल नजिकै अवस्थित छ. एक थीम पार्क को रूपमा जुन पानीको नजिक अवस्थित छ, गार्डाल्याण्ड थिम पार्कमा धेरै रमाईलो सवारीहरू छन्, कोलोराडो डु like्गा जस्तै, र जंगल रैपिडहरू.
साथै, गार्डाल्यान्डको पनि समुद्री जीवन एक्वैरियम छ, को 13 थीम भएको क्षेत्रहरू, र 100 प्रजाति. पक्कै, तपाईका बच्चाहरू समुद्री मुनि एकदम मोहित हुने छन्, र कहिले पनि छोड्न चाहँदैन.
यसको विपरितमा, यदि तपाईं एड्रेनालाईनको बारेमा हुनुहुन्छ, then you’d love the thrilling Blue Tornado rollercoaster.
कसरी Gardaland थिम पार्क को लागी?
तपाईं Trenitalia ट्रेन भेनिस देखि Peschiera डेल Garda स्टेशन को लागी लिन सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि Gardaland मा शटल.
5. Efteling पार्क नेदरल्याण्ड
Efteling थीम पार्क को एक हो 10 यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ थिम पार्क. हामी सबैमा हुर्केका कल्पित कथा Efteling को आकर्षण र मंत्रमुग्ध वनको जीवनमा आउँदछन्, हंस क्रिश्चियन एन्डरसनबाट ब्रदर्स ग्रिमसम्म.
फाटा मोर्गाना ले तपाईंलाई सुदूरको सुदूर पूर्व र भूमिमा लैजान्छ, जबकि पानी कोस्टरहरू र स्टीम कोस्टरहरूले तपाईंलाई तपाईंको जंगली सपनाहरू भन्दा टाढा लैजाने छन्. परियोंको दुनिया तपाइँको लागी एक को लागी डुङ्गा सवारी अँध्यारो र रहस्यमय Droomvlucht मा.
कुनै पनि शब्दहरू सम्पूर्ण परिवारको लागि Efteling थीम पार्क को जादू वर्णन गर्न पर्याप्त हुनेछ, त्यसोभए तपाईंले नेदरल्याण्डमा छुट्टीको बेला यस थिम पार्कको लागि केवल समय बनाउनुपर्दछ.
कसरी Efteling थिम पार्क को लागी?
तपाईं एम्स्टर्डमबाट ट्रेनलाई लिन सक्नुहुनेछ 's-Hertogenbosch, र त्यसपछि Efteling थिम पार्क को लागी बस.
6. विन्डसर बेलायतमा लेगोल्याण्ड थिम पार्क
जब सबै आकर्षणहरू पूर्ण रूपमा लेगो-निर्मित हुन्छन्, यो थिम पार्क बच्चाहरूको लागि अर्को स्वर्ग हो. विन्डसरमा लेगोल्याण्ड थिम पार्क लेगो खेलौना प्रणाली वरिपरि बच्चाहरूको लागि सिर्जना गरिएको थियो.
त्यसैले, प्रत्येक एकल रोलरमास्टर, डु boat्गा, र ट्रेन विशाल लेगो टुक्रा द्वारा तैयार गरिएको छ. इ England्ल्यान्डको यो अद्भुत थिम पार्क बर्कशायरमा स्थित छ र लन्डनबाट आधा घण्टा मात्र.
विन्डसरमा कसरी लेगोल्याण्ड थिम पार्क प्राप्त गर्ने?
तपाईंले लन्डन प्याडिंगटनबाट विन्डसर सम्म ट्रेन लिनु पर्छ & जडानको साथ इटन सेन्ट्रल, वा लन्डन वाटरलू बाट सीधा ट्रेन. त्यसपछि, त्यहाँ प्रत्येक रेल स्टेशनबाट लेगलल्याण्ड सम्म शटल बसहरू छन्.
7. फ्रान्स मा Asterix थिम पार्क
यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, पार्क एस्टरिक्स अल्बर्ट उडरजो र रेने गोस्सिनीको प्रसिद्ध हास्य पुस्तक श्रृंखलामा आधारित छ, एस्टरिक्स. त्यसैले, नजिक2करोडौं आगन्तुकहरूले फ्रान्सको दोस्रो ठूलो थिम पार्कको चमत्कारबाट आनन्द लिन्छन्. पहिलो पाठ्यक्रमको जादुई डिज्नील्याण्ड हो.
एस्टरिक्स थिम पार्कमा तपाईले भव्य डिस्कोबेलिक्स फेला पार्न सक्नुहुन्छ र एक सुपर घुम्ने समय पाउन सक्नुहुन्छ, डल्फिन र गाउँ गाउलोइसमा अन्य जनावरहरू भेट्नुहोस्, र पक्कै पनि अन्य रोचक आकर्षणको मजा लिनुहोस्.
कसरी एस्टरिक्स पार्क गर्न को लागी?
एस्टरिक्स थिम पार्क मात्र हो 30 पेरिसबाट मिनेटहरू लाइन B मा पेरिस Gare du Nord बाट RER ट्रेनमा. त्यसोभए तपाईं चार्ल्स डे गउलमा जानुहुन्छ 1 हवाई अड्डा, र पार्क शटल को लागी.
8. फ्रान्स मा Futuroscope पार्क
रोबोटको साथ नाच, समय यात्रा, र यात्रा गर्न4माथिल्लो पृथ्वीको कुनाहरू, फ्यूचरोस्कोप थिम पार्क यस संसारबाट बाहिर छ. यो अद्भुत थीम पार्क फ्रान्स मा सुन्दर Nouvelle-Aquitaine क्षेत्रमा अवस्थित छ.
फ्यूचरोस्कोपले विज्ञानको साथ संवेदी आकर्षणहरू जोड्दछ र सम्पूर्ण परिवारको लागि रमाइलो र शैक्षिक अनुभव हुनेछ.
कसरी फ्यूचरोस्कोप थिम पार्कमा पुग्ने?
तपाईं युरोस्टार द्वारा लिली वा पेरिसमा असाधारण फ्यूचरोस्कोप थिम पार्कमा पुग्न सक्नुहुनेछ, र TGV मा परिवर्तन गर्नुहोस्.
पेरिस एक ट्रेन संग रुउन
पेरिस गर्न Lille एक ट्रेन संग
एक रेल संग ब्रेस्ट गर्न रौंन
एउटा ट्रेनको साथ ले हभ्रेमा रुन्
9. युकेमा चेसिंग्टन वर्ल्ड अफ एडभेन्चरस थिम पार्क
युकेमा चेसिंग्टन वर्ल्ड अफ एडभेन्चर एक सफारी-थीम्ड पार्क हो. यसको मतलव कुनै पनि परिवार चेसिंग्टन मनोरञ्जन पार्कको भ्रमण पारिवारिक साहसिकमा परिणत हुन्छ र रहस्यमय र मोहक जating्गली जनावरहरूको र अफ्रिका भरि.
जंगली रोमांचका साथै, तपाईं सफारी र Azteca थीम भएको होटेलमा बस्न मजा लिन सक्नुहुन्छ, र तपाईंको बसाई बढाउनुहोस्. त्यसैले, यदि तपाईं जंगली रोमांचमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग ज across्गल रेंजरहरूमा पार्क भरि एक अद्भुत समय हुनेछ, टाइगर रक, र नदी राफ्ट्स.
साहसको चेसिंग्टन संसार साहसिक परिवारको लागि डिजाइन गरिएको हो, र तपाइँ आफ्नो जीवन को समय को लागी बाध्य छन्.
कसरी एडभेन्चरको चेसिंग्टन वर्ल्डमा पुग्ने?
चेसिंग्टन जंगली थिम पार्क हो 35 केन्द्रीय लन्डनबाट रेलमा केही मिनेट. त्यसैले, तपाईं वाटरलूबाट चेसिंग्टन साउथ स्टेशनमा दक्षिण-पश्चिमी रेलवे लिन सक्नुहुन्छ.
10. जर्मनीमा Fantasialand थिम पार्क
Fantasialand मा सबै बच्चाहरुको कल्पनाहरु साकार हुन्छन्6शानदार संसारहरू. सबै संसारमा, तपाईं सबैभन्दा थ्रिलिंग सवारीको मजा लिन सक्नुहुन्छ, र प्रकाश र रंग को ठाउँ.
त्यसैले, के Fantasialand यूरोप मा एक उत्तम थिम पार्क को एक बनाउँछ? चीन टाउन, मेक्सिको, अफ्रीका, बर्लिन, Wuze टाउन, रहस्य राज्य, र रुकबर्ग, हरेक विश्व मा एक अद्भुत आकर्षण संग. कालो माम्बा देखि प्रसिद्ध तारोन सम्म, यी सवारीहरूले तपाईंलाई उडाउँनेछन्.
Fantasialand कसरी पुग्ने?
तपाईं Bruhl रेल स्टेशन बाट एक शटल लिन सक्नुहुन्छ. Fantasialand Bruhl मा स्थित छ, कोलोनबाट केवल २o मिनेट.
यो रमाईलोको लागि, युरोपको उज्जवल दिमागले विश्वमा सब भन्दा आश्चर्यजनक थिम पार्कहरू सिर्जना गरेको छ. चाहे तपाइँ बच्चाहरु संग यात्रा गर्दै छन् वा एक साहसिक को लागी पुराना बच्चाहरु ले, को 10 हाम्रो सूचीमा सर्वश्रेष्ठ थिम पार्कहरू सबै उमेरका लागि सबै भन्दा राम्रो आकर्षणहरू छन्.
बर्लिन एक ट्रेन संग आचेन
फ्रान्कफर्ट एक ट्रेन संग कोलोन
एक ट्रेनको साथ कोलोन गर्न ड्रेस्डेन
आचेन एक ट्रेन संग कोलोन
यहाँ एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई तपाईंको यात्राको योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं “10 यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ थिम पार्क”.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा १० सर्वश्रेष्ठ थिम पार्क" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-theme-parks-europe%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
BestthemeparksEurope Familytripeurope आउटडोर गतिविधिहरू themepark ThemeParks रेल यात्रा traintraveleurope